Mikhail Lomonosov owayemuhle wayebizwa ngokuthi kudala ebhukwinitifundvo ubuntu. Umfundi ngamunye kusukela esemncane ukwazi usosayensi oluvelele, noma ngisho ukhona futhi uthola isithombe sakhe ku-portrait.
Mikhail Lomonosov: isithombe usosayensi, wenza Schulze umdwebo
Esikhathini Umdwebo XVIII leminyaka funa ekhethekile imidwebo zabantu. Lokhu kubangelwe kuya isidingo abantu ukushiya trace emlandweni futhi banikezwe ukwaziswa ngezinye inzalo ka kanjani wabheka izingqondo esivelele isikhathi sabo. Umuntu onjalo, njengesazi sesayensi oluvelele, iphayona emikhakheni eminingi yesayensi, umlobi wesichazamazwi, imbongi kanye nje umuntu omkhulu ngamandla into engavamile ngokomzimba wayengeke akwenze ngaphandle ukunakwa abaculi.
Portrait Lomonosov zonke ajwayelekile kusukela ebuntwaneni. Bambalwa abantu bazi ukuthi lesi sithombe ajwayelekile usosayensi has ukutolika eziningana, futhi ngezinye izikhathi kunzima kakhulu ukuhlukanisa isandla yenkosi yakhe. Phakathi imisebenzi eminingi yobuciko nesithakazelo esikhulu Gravure isithombe Lomonosov, eyabhalwa uM Schreyer ku umdwebo ozakwabo nothisha H. Schulze.
Ukwakheka komsebenzi akuyona okuningi ezahlukene kusukela yawo, abe Fessard, kodwa kuyabonakala ukuthi Schreyer kwenza imininingwane eminingana ezithakazelisayo. Usosayensi ayigcini zombili izandla phezu kwetafula, ihlezi sikhundla evulekile, eneka esifubeni ngendlela, elingenamikhono scruffy ekhaya-ezigugile. Ngesinye isandla, Mikhail egcine ngazo amarekhodi kanye nezinye esibayeni. Wakhe sobuso unika ukucabangela kakhulu, kodwa ungakwazi ukubamba amanothi nomdlandla emehlweni akhe. Ngaphambi umbukeli uvezwa isithombe Lomonosov, omatasa inqubo yokucabanga kanye ngesikhathi esifanayo bazama konke kahle indlela ozizwa ngayo. Vula ibhuku phambi kwakhe amanga umsebenzi ukunganaki.
Eqinisweni Okungalindelekile mayelana umbhalo
Schreier lokuqopha esibonisa isithombe Lomonosov eMoscow State University, has esinye isici phezu okuyinto a baxgeki Namanje ukuzinwaya ikhanda lakhe. Kusolwa ukuthi umsebenzi kulotshiwe phezu Schulze isithombe, kodwa wazalwa 1749, ayixhumene nama usuku lokuqalisa we umbhalo - ekupheleni kwekhulu XVIII. Uma sibheka isithombe ungabona ukuthi nencwadi evuliwe ongaphambili ungabona igama Petru mina, esikhundleni Elizabeth, phakathi kwesikhathi lapho Lomonosov wahlala. Ukwakheka jikelele is stylistically yakhiwa kuleli isitayela baraque, nakuba ngasekupheleni kwekhulu XVIII liyinkathi lapho art yayibuswa classicism. Ngokusekelwe kulezi nokushintshashintsha izwe art ukugxekwa yasikisela ukuthi isithombe Lomonosov izandla Schreier wadabula izigaba eziningana ukuthuthukiswa, futhi umculi alikho contact uqobo kanye nososayensi. Ekuqaleni, lo mfanekiso ka Mikhail Vasilyevich sidalwe ke Schulze wenza umdwebo naye. Ngesikhathi sigaba sokugcina Schreyer wadala umbhalo yakhe edumile esekelwe emfushane ipensela sabafundisi bakhe, osebenza nabo.
izinkondlo nezici zendlela yokubhala kwendandatho
Le ncwadi eshiwo ngenhla isitayela Baroque esithombeni, okuyinto beyingasanandawo ekhulwini XVIII, uchaza inqubo kwezobuciko ukuthi beza kithi kusukela esikhathini esingaphansi koMbuso WamaRoma. Kuhloswe ukuba babhale umbhalo esibonisa usosayensi oluvelele, Schulze, nangemva kwakhe, yebo, futhi Schreyer wathola i-prototype efanelekayo yesithombe, lapho uJean-Zhak Russo wayechazwa. Wathatha-ke njengesisekelo, 'watshala' phezu komzimba sazi ikhanda University. Kuyinto leli qiniso echaza nokungahambisani wesitayela ku lokuqopha Shreyra nge ebusa canons in umdwebo ekupheleni kwekhulu XVIII.
I abadlali amahle kunawo Hollywood - le emihlanu engcono
Iminyango yomlilo: i-GOST nezinhlobo